आफ्नै अं’ग भएपनी छुन नहुने शरीरका यी ६ अं’गहरु थाहा पाउनुहोस – Sanjal Nepal
Homeस्वास्थ्य /जिबनशैलीआफ्नै अं’ग भएपनी छुन नहुने शरीरका यी ६ अं’गहरु थाहा पाउनुहोस
April 13, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 16936
हाम्रो शरीरका केही यस्ता अं’ग छन्, जसलाई छुनु हुँदैन, तर हामी छोइदिन्छौ । तर, के तपाईलाई थाहा छ, यी अंग छोएका कारण हाम्रो शरीरभित्र ब्याक्टेरिया छिर्ने र बिरामी बनाउँछ ? जान्नुहोस् ती अं’गका बारेमा ।
मुख – मुखको माध्यमबाट सजिलै शरीरभित्र ब्याक्टेरिया पस्ने हुन्छ । त्यसैले, औलाहरुलाई बारम्बार मुख वा ओठमा लाने काम नगर्नुहोस् ।
काखीमा लगभग ८० हजार ब्याक्टेरियाको बास हुन्छ । त्यसैले गर्दा पसिना निस्किएपछि काखी गन्हाउने हुन्छ । अन्जानमा पनि आफ्नो दुर्गन्धित काखी नछुनुहोस् र हरेक दिन यसलाई सफा गर्नुहोस् ।
कान चिलाउने बित्तिकै तपाईको औला कोट्याउन पुगिहाल्छ, तर के तपाईलाई थाहा छ, शरीरको सबैभन्दा फोहोरी अं’ग कान हो भन्न ? कानेगुजीका कारण कानमा ब्याक्टेरिया फैलिन थाल्छ । यदि कान चिलाएको बेला हातको औलाको सट्टा इयर बडको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
नामको प्वालमा औँला लगाउनु हुन्न, किनकि नाकबाट श्वास लिँदा सिधै ब्याक्टेरिया शरीरभित्र पुग्छ । यदि तपाईको नाक कोट्याउने बानी छ भने त्यो अस्वस्थ्य बानी हो ।
हेर्दा सफा लाग्ने नाभि अर्थात् नाइटो खासमा सफा हुँदैन । नाभिमा हजारौँ ब्याक्टेरिया लुकेर बसेको हुन्छ । त्यसैले नाभिलाई हातले छुनबाट बच्नुहोसु र रोगबाट बच्नुहुन्छ ।
त्यसो त बारम्बार छोइन अं’ग त होइन तर, तर हात पुगेमा ब्याक्टेरिया सर्ने हुन्छ । ब्याक्टेरियाको वास रहेको मलद्धार छुनबाट बच्नुहोस् ।
source samachar batika
January 11, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 6992
November 19, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 10030
August 2, 2020 Administer अन्तर्राष्ट्रिय, बिज्ञान प्रबिधि, स्वास्थ्य /जिबनशैली 25156